China Posture orinasa mpanitsy sy mpamatsy | qiangjing
Ny mpanitsy ny posture dia novolavolain'ny orinasa manokana ho an'ny fihazana hazakaza-tongotra sy fandehanana ary manondraka olona nateraky ny fahazaran-dratsy ratsy. Izy io dia afaka manitsy ny fihazana boribory, soroka soroka, fanaintainana amin'ny soroka, fanaintainan'ny lamosina ary ny fanaintainana; ahitsy ny fipetrahana hipetrahana ratsy, mijoro posture sy fanaintainan'ny aretin-kibo vokatry ny fipetrahana maharitra.
Ny toerana iray mipetraka tsy mendrika dia miteraka ny fiantraikany amin'ny vatantsika. Eo amin'ny fiainana andavan'andro sy ny asa, dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'izany isika. Ho an'ny vatana salama, miangavy anao hihazona ny toerana hipetrahana tsara. Angamba tsy niraharaha an-tsipiriany kely ianao tamin'ny fiainanao isan'andro. Ny fanaintainan'ny androm-piainana, noho ny fipetrahan'ny mpianatra tsy mendrika dia tsy fanetren-tena ary tokony homena lanja ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny!
Araka ny tatitry ny fampahalalam-baovao vao haingana, marary maherin'ny 100 manana hazondamosin'ny hazondamosina no voaray tao amin'ny faritra prostetik an'ny foibe fanarenana izay mifamatotra amin'ny Federasiona Fikambana China Disabled Persons '. Amin'ireo marary ireo, ny raharaha mafy dia tsy maintsy mizotra fanitsiana.
Sarotra ny manao fandidiana fanitsiana amin'ny hazondamosina, satria misy hazondamosina eo amin'ny hazondamosina izay ilaina amin'ny vatan'olombelona. Ny fiasan'io nerve io dia tena sarotra. Raha toa ka tsirambina kely ny fandidiana dia mety hiteraka fahasembanana mafy, vokatr'izany.
Ny voka-dratsin'ny fihenan-tsina amin'ny hazondamosin'ny olona dia tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany amin'ny fisehoana ihany, fa koa mampahory ny fo sy ny havokavony, miantraika ny fiasan'ny fo sy ny havokavoka ary na dia mampihemotra ny androm-piainany aza.
Indrindra ny tanora mijaly amin'ny hazondamosin'ny hazondamosina dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana. Ny hamafin'ny hazondamosina dia miorina tsikelikely noho ny fisian'ny seza maharitra ela, toy ny miankohoka amin'ny lamosin'ny boky hamaky sy hanoratra, ary ny antsasaky ny lainga ary mandry mijery tele. Izany dia mampiseho fa mba hisorohana ny fametahana taolana, ny fisorohana no tena lehibe indrindra. Ny ray aman-dreny dia tokony hampianatra sy hanara-maso ary manitsy ny toerana hipetrahan'ny zaza, ary tsy tokony avela hiondrika hamaky sy hanoratra ary hianjera eo am-pandriana ny ankizy rehefa mijery fahitalavitra. Rehefa mandro ho an'ny zanakao ianao dia tokony hizaha ny hazondamosin'ny zanakao amin'ny scoliosis. Raha mahita zava-manahirana ianao, dia mitondrà izany amin'ny fotoana.
Talohan'ny 16 taona dia mbola tsy niforona tanteraka ny soroka olombelona. Ireo izay mijaly amin'ny hazondamosina mafy dia mbola afaka manitsy amin'ny fanaovana fanazaran-tena sy manao fitafy orthotika; raha 16 taona mahery izy ireo, dia namboarina ny sorona maha-olombelona ary azo atao fanitsiana ihany amin'ny alàlan'ny fandidiana.
Artikety fanitsiana ny famoronana
Manana dokotera manokana ve ianao? Lafiny inona amin'ny dokotera no tompon'andraikitra aminao?
Mampahatsiahy tsara ny rehetra ny mpanolotsaina momba ny fahasalamana:
Inona avy ireo vokatra ratsy amin'ny fipetrahana tsy mendrika?
Aretim-bolo, setroka tsy misy haingony, toy ny mitsimbina sy mihazakazaka, dia hampahory ny taova anatiny, misy fiantraikany amin'ny ra, mampihena ny fandevonan-kanina sy manaintaina. Miangona ao anaty vatana ny poizina ary tsy azo esorina ara-potoana. Izy ireo dia mety hiteraka mony manodidina ny zoro amin'ny vavany.
Mangatsiaka sy tongotra
Ny hazondamosina dia tsy vitan'ny hoe manohana ny lanjan'ny vatana ambony, fa ny fantsona mampiavaka ny nerve autonomic. Raha tsy marina ilay atiny, rehefa mandeha ny fotoana, dia hampahory ny ratra autonomic izy io, mitondra fikorontanana, soritr'aretina toy ny tanana mangatsiaka sy tsy voan'ny tazo, ny aretin'andoha, aretin-doha ary havizanana mora.
Ny fiasana mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny fihazana na manondraka ny vava, miasa amin'ny Internet, sns., Dia hanao ny hazondamosina amin'ny endrika fehizoro, izay hanery ny diaphragm amin'ny vatana, izay hanao ny rivotra misefo, ary ny atidoha dia ho hypoxic mandritra ny fotoana maharitra. Tsemboka, aretina maty, sns.
Miankina amin'ny fihazana ihany koa dia mitarika amin'ny mivezivezy lymphatic malemy amin'ny tendany sy ny toerana hafa, izay hanelingelina ny fandroana ny fako metabolika, hampihena ny fahombiazan'ny metabolisma, mitarika amin'ny fanangonan'ny tavy amin'ny vatana, hahazoany lanja ny olona. Tarehy Puffy
Ny olona manana hajan-tsaina malemy matetika dia malemy na hozatra, ary mora miala voly ny hozatra tarehy, ka hita taratra izany.
Ny faharatrana ratsy toy ny fanitarana ny vozony dia misy fiantraikany amin'ny hetsika moka sy ny fandehanan-dra, ary mora mitarika amin'ny fanangonan'ny fako metabolika manodidina ny andiany, ka mamorona tongan-droa.
Myopia, fitomboana taolana
Ny loza ateraky ny myopia dia tsy maintsy mazava amin'ny rehetra, ary olona maro izay tsy mahalala momba ny scoliosis. Raha ny tena izy, tsy mitombina ny firongatry ny scoliosis amin'ny tanora.
Ny scoliosis dia mety hiteraka tsy fahatomombana hita maso ary misy fiantraikany amin'ny hatsarana. Voafetra ny fitomboan'ny zaza sy ny haavony. Hisy koa ny soritr'aretin'ny fanaintainan'ny lamosina ambany, ny fiasana cardiopulmonary tsy mahazatra, ary ny fanerena ny nerveo mahery vaika, mahatonga ny fahatsapana ny tsy fahampiana, ny fahalemena ary ny fandehanana amin'ny tongotra ambany. Mety hanakana. Afa-tsy ireo antony mahatonga an'io aretina io, ny fisian'ny toerana hipetraka amin'ny fotoana maharitra no tsy antony.
Nampiasaina tamina tsy fahalalany ny tongotr'i Erlang? Ity posture ity dia hamerana ny rà làlan-tongotra iray, ary ny lanjan'ny vatana lava dia havoaka amin'ny tongotra iray koa. Nandritra ny fotoana maharitra, dia hiteraka ny vokatry ny scoliosis ary koa mitarika ny tsy fanabeazana pelvika.
Manaraka: Fanohanana ankavonana